बालिकाहरु बम्बई लाने गिरोह खोज्दै प्रहरी - Nepal Face
जनकपुरधाम। भारतको सीतामढीबाट उद्दार गरिएका महोत्तरीका सात जना किशोरी तथा बालिकालाई मनोविमर्शका लागि ओरेक नेपालको सेफ हाउस पठाइएको छ ।
‘उनीहरु सबै डराइरहेका छन् । खाना खाँदैन । सानी बच्चीहरु रोइरहेका छन्,’बालिका तथा किशोरीहरुको अवस्था बारे बताउँदै अधिकृत दियालीले भनिन्,‘अब कसरी फेरि घर फर्किएर जाने ? गाउँमा कसरी मुख देखाउने ? कसरी स्कुलका साथीहरुसँग बसेर पढ्ने ? जस्ता कुरामा उनीहरु मन डुलाइरहेका छन्’ सात जना मध्ये ६ जना बालिका गाउँकै सरयुग आशाराम आधारभूत विद्यालयमा अध्ययरत छन् ।
कसैले फकाएर भारत पुगेका उनीहरुलाई प्रहरीले फेला पारेपछि निकै त्रसित रहेको उनले बताइन् । ‘त्यसैले उनीहरुलाई समाजिक जीवनमा फर्काउन र जीवनप्रति आशावादी बनाउन काउन्सिलिङ गर्दैछौँ । बालिका तथा किशोरीहरुको मन शान्त भएपछि प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न पनि सहज हुन्छ’ उनले बताइन् ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले सीतामढीबाट उद्दार गरेर बुधबार राति साँढे ११ बजे उनीहरुलाई महोत्तरीको जलेश्वर ल्याएको थियो । बिहीबार दिनभर महिला तथा बालबालिका कक्षमा राखेर उनीहरुलाई प्रहरीले हौसल्ला प्रदान गरेको थियो ।
यता प्रहरीले बालिका तथा किशोरीलाई सीमा कटाउने गिरोहको खोजी गर्न पारिका सुरक्षा निकायसँग सहकार्य गरेर खोजी कार्य तिब्र पारिएका छन् । भिट्टामोड सीमा नजिकैबाट घरबाट उनीहरुले घाँस काट्न लगेको बोरा र कचियाँ बरामद भएको छ ।
‘टेम्पोमा चढेर उनीहरु सीमा नाकासम्म पुगेका थिए । प्रहरीको आँखा छलेर उनीहरुलाई मंगलबार साँझ ५ बजे तिर चोरबाटोबाट भारत तिर गएका थिए । त्यहाँबाट सार्वजनिक बस चढेर सीतामढी रेल्वे स्टेशन पुगेका ट्राभल हिस्ट्री देखिन्छ ’ एसपी आचार्य भन्छन् ।
कोरोना संक्रमण फैलिएपछि गत वर्ष चैत्र ११ गतेदेखि नै भिट्टामोड नाका सील छ । तर, गिरोहले चोरबाट उनीहरुलाई भारत तिर लगेको प्रहरीको भनाइ छ ।
प्रहरीले खोजवीन गरेपछि मानव तस्करका समूह बालिका तथा किशोरीहरुलाई रल्वे स्टेशनमा अलपत्र छाडेर फरार भएको प्रहरी श्रोतले जनायो । उनीहरुसँग साथमा मोवाइल छैन । त्यसैले उनीहरुलाई गाउँबाटै गिरोहले ललाइफकाइ सीमा कटाएको देखिने अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीको भनाइ छ । (अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकबाट)
शुक्रवार, चैत्र २० २०७७०७:१५:०६
# गिरोह # बम्बई
भारतमा अहिलेसम्मकै धेरै सङ्क्रमित भेटिए, २४ घण्टामा ९०४ जनाको मृत्यु
पोखरामा युवकमाथि गोली प्रहार गरी फरार रहेका पाण्डे पक्राउ
सिराहा बम बिष्फोट : थप एक पक्राउ
सिराहमा अज्ञात समूहद्वारा सुनचाँदी व्यपारीको गोली हानी हत्या